Festival Cologne waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu ku daray liiska baaldi aad. 1.5 Milyan oo xaadira ku dhowaad sannad kasta, heshiiyaan! Sidoo kale loo yaqaan ee xilli ciyaareedka shanaad, iid caansan dunida ee ay tani tahay inuu noqon doono waayo-aragnimo ah ee Meyeydaan. damaashaad Cologne The ma aha oo kaliya mid xiiso leh, laakiin sidoo kale…
Ah, Switzerland, waddan qurux badan oo nabdoon oo si raaxo leh u dhex fadhiya Talyaaniga, France, iyo Germany. Waa booqo si aad u aragto sababta Switzerland waxaa si joogto ah loo qiimeeyo mid ka mid ah dalalka ugu farxadda badan dunida oo dhan. Sidaas maxaad u malayn of marka aad u malaynayso 'Switzerland'? Aniga…
In this post, waxaan isku dayi doonaa in badan oo ku saabsan Local Tareen Ticket jaale bartaan online. Marar badan, safra u muuqdaan in ay sugaan illaa waqtiga ugu dambeeya ka dibna ballan tikidhkeeda. Tayaasha tigidhada tareenka daqiiqadii ugu dambeysay wax caqliga leh inay sameeyaan ma aha. Tani…
Qof walba waxaa ku riyooneysa Spring for cimilada diiran. Mar walba waa ay waqti qurux badan Yurub marka barafka ee xilliga qaboobaha jidka u samaysaa cusboonaysiinta iftiimay of guga. Parks iyo Jannooyin ay yimaadaan nool iyo magaalooyinka nolosha mar kale iska noqda. Safraya Europe guga, ka hor…
Safraya Europe on miisaaniyad waa caqabad! Si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah inta aad sameeyo cilmi-baaris si loo diyaariyo safarkaaga si caqli ah. Waxaa aad la yaab yaabaa in inta aad ku badbaadin karto by qaadashada hab saxda ah ee gaadiidka ama dooranaya dalal ka jaban. Trust…